Ikhaya > Iindaba > Iindaba zeshishini > Izinto ezifunekayo ekwenziweni komngundo weplastiki osetyenziselwa umzi
I-Polypropylene yintsimbi ye-thermoplastic eyenziwe nge-polymerization yepropylene. Ngokuya ngesikhundla se-methyl, inokwahlulahlulwa ibe ziindidi ezintathu: â ‘isotactic polypropylene, â¡¡ polypropylene kunye ne-polypropylene ye-interisotactic.
PP non-ityhefu, nasongo, kungenziwa nkxu kwi 100â „ƒ amanzi abilayo ngaphandle deformation, akukho monakalo, acid eqhelekileyo, izinyibilikisi organic kwealkali phantse akukho isiphumo kuyo ubukhulu becala isetyenziselwa tableware. Iibhokisi zesidlo sasemini ukunyibilika ukuya kuthi ga kwi-167â „ƒ, kuphela kwebhokisi yeplastiki enokubekwa kwi-oveni ye-microwave, inokuphinda isetyenziswe emva kokucoca ngononophelo.
Ukuxinana okuncinci, ukuqina kwamandla, ubunzima kunye nokumelana nobushushu kungcono kune-polyethylene ephantsi, enokusetyenziswa malunga ne-100 degrees.
Inezinto ezifanelekileyo zombane kunye nobushushu obuphezulu obuphezulu abuchaphazelekanga kukufuma, kodwa amaqondo obushushu asezantsi ayaphuke, awunxibi ukumelana, kulula ukwaluphala.
Itekhnoloji yokulungiselela ye-PP
I-PP isetyenziselwa ukubumba inaliti: iimveliso zeenaliti ze-PP zinokuphendula malunga nesiqingatha, izinto eziyimfuneko imihla ngemihla nge-PP eqhelekileyo njengezinto ezingavunyelwanga, iinxalenye ezizenzekelayo ukomeleza okanye ukuqinisa i-PP njengezinto ezingafunekiyo, ezinye izinto zisebenzisa amandla aneempembelelo eziphezulu kunye neqondo lobushushu elisezantsi le-PP- C okrwada.
Iingongoma Zengqwalaselo Xa Zisetyenziswa
Enye ibhokisi yemicrowave, ibhokisi yebhokisi ukuya kwimveliso ye-5 PP, kodwa isiciko sebhokisi senziwe kwi-1 PE, kuba i-PE ayinakumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ayinakubekwa kwi-oveni ye-microwave enomzimba webhokisi.
I-PVC yipolymer yesimo sokumodareyitha sasimahla se-polyethylene monomer. Le yenye yeentlobo zokuqala zentlaka ezinamashishini. Yeyona ntlobo inkulu yentlaka phambi kweminyaka yoo-1960, kwaye yeyesibini ekupheleni kweminyaka yoo-1960.
Ngokobunzima beemolekyuli, i-PVC inokwahlulahlulwa ibe luhlobo oluqhelekileyo (i-avareji yedigri yokupolisha ingama-500-1500) kunye nenqanaba eliphezulu lokumilisela (iqondo lokumodareyitha lingaphezulu kwe-1700) iintlobo ezimbini. chwetheza.
Ezona mpawu ziphambili zePVC:
I-1) ukusebenza ngokubanzi: I-PVC resin yimpuphu emhlophe okanye emthubi, ubunzima beemveliso zayo bunokulungiswa ngokongeza inani leeplasticizers, ezenziwe ngeemveliso ezithambileyo nezinzima.Ukufakwa kwamanzi ePure kunye nokuvumeleka kuncinci kakhulu.
I-2) Iipropathi zoomatshini: I-PVC ine-hardness ephezulu kunye neepropathi zoomatshini, kwaye inyuka ngokunyuka kobunzima beemolekyuli, kodwa iyancipha ngokunyuka kobushushu. Ngokubanzi, iipropathi zoomatshini ziyancipha ngokwanda komxholo weplasticizer. Ukunxiba ukumelana nePVC ngokubanzi.
1) isicelo iimveliso PVC nzima
Izinto Pipe:esetyenziselwa umbhobho wamanzi aphezulu, umbhobho wamanzi asezantsi, umbhobho wegesi, umbhobho wokumilisela kunye neeprofayili zombhobho womsonto: esetyenziselwa iingcango, iWindows, iibhodi zokuhombisa, imigca yeenkuni, ifanitshala kunye nezinyuko zokubamba.
Ipleyiti:zingahlulwa zibe yibhodi incence, ibhodi eshinyeneyo kunye nebhodi eyenziwe ngefoyile, esetyenziselwa siding, isilingi, shutter, umgangatho njalo njalo.Sheet: esetyenziselwa iimveliso zeplastiki, ezifana ezahlukeneyo ukupakisha box.Silk: esetyenziselwa window screen, umnatha iingcongconi , intambo njalo njalo.
Udidi lweebhotile:ukutya, amayeza kunye nezinto zokupakisha zokuthambisa.
Iimveliso Inaliti:izixhobo zombhobho
2) ukusetyenziswa kweemveliso zePVC ezithambileyo
Ifilimu:ifilimu eluhlaza kwezolimo, ifilimu yokupakisha, ifilimu yemvula, njl.
Intambo:Isetyenziselwa ibhokisi yokufaka yokuhambisa umbane kunye nephakathi kunye neqondo eliphantsi.
Isikhumba:isikhumba esenziwe ngumntu, isikhumba somgangatho kunye nephepha lodonga, njl njl.
Edlulileyo:Intshayelelo PC iimveliso zeplastiki
Okulandelayo:Nguwuphi umgaqo na ziphene yokubumba ekusebenzeni zeplastiki sokubumbela?